OpenSUSE Leap15 yave kuwanikwa kurodha pasi nekuisa | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi lkuvhuraSUSE vagadziri unofara kuzivisa iyo nyowani vhezheni yako yekushandisa system inosvika yako itsva openSUSE 15 vhezheni iyo yakavakirwa pane iri kuuya SUSE Enterprise Linux 15 akateedzana uye maficha akagadziridzwa zvinhu uye matekinoroji akagadzirirwa vashandisi vemberi.
Iyi vhezheni itsva Inoonekwa seye anotsiva OpenSUSE 42.3. Chiziviso chakaitwa nechikwata chekuparadzira uye chinoonekwa senge nyowani sisitimu yekushandisa, sezvo ichirerutsa kutamira kuSUSE Linux Enterprise (SLE).
Iyi vhezheni nyowani yeakavhurikaSUSE chirongwa inouya kuzogadzira kutsva kutsva mukuverenga kwekuparadziraSekutaura wega, ndinogona kutaura kuti haina chero odha uye inowanzo kuvhiringidza vashandisi vatsva vanofarira kushandisa iyo system.
1 Chii chitsva mukuvhuraSUSE Leap 15
2 Dhawunorodha vhuraSUSE Leap 15
Chii chitsva mukuvhuraSUSE Leap 15
Mune ino vhezheni nyowani yekuvhuraSUSE Leap 15 ikozvino inobvumira kutamira kuSLE, zvakare chikamu chitsva chakawedzerwa inoitwa muchirongwa chekugadza, pamwe nekubatanidzwa neKopano yakavhurwa sosi groupware suite, Firewalld default firewall manejimendi yekushandisa, nyowani server mabasa uye "transactional server".
Uyewo inoparadzirwa naLinode ine midzi faira system yekuverenga-chete uye zvinyorwa zvekushandurwa, cloud optimizations, uye kutarisa zvachose uye kunzwa kwakanyatsoenderana neSUSE Linux Enterprise.
Iyi vhezheni itsva ye openSUSE Leap 15 ichave nerutsigiro rwe kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa panguva inotevera makore matatu.
Pamusoro peizvozvo, Svetuka 15 inouya neese maficha ekambani izvo vashandisi vepamberi uye nyanzvi dzeIT dzinoda.
Izvi zvinosanganisira kugona kufambisa yakavhurikaSUSE Leap 15 kuisirwa kuSUSE Linux Enterprise 15 , nazvo izvi inopa mukana wechitupa uye kuita kwenguva refu kushandiswa kukuru kwekambani inoshanda sisitimu.
Inosvitsa sarudzo yemabatiro ehurongwa neiyo yakasarudzika "sevha" kana "transactional server" basa ine transactional inogadziridza uye kuverenga-chete mudzi faira system.
Yakapihwa neyakavhurikaSUSE Kubic Container Platform chirongwa, iri basa rinoshandisa meseji kupa yakavhurikaSUSE Leap mune yakawanda kesi dzekushandisa, kusanganisira inomiririra midziyo.
Izvi zvinopa zvese zvakanakira kukwidziridzwa kweiyo yese chiyero chekutumirwa, kubva paInternet yezvinhu (IoT) nemidziyo yakadzamidzirwa kune yakasarudzika server uye desktop mabasa.
Zvimwe pane izvo, Reap 15 yakagara ichigadzirisirwa zviitiko zvekushandisa gore semuenzi wekuona uye panguva imwechete inopa akasiyana akasiyana madhesiki.
VhuraSUSE Leap 15 inovandudza zvakare YaST uye AutoYaST sisitimu yekumisikidza chishandiso, Naiwo yakagadziridza akati wandei zvezvinhu zvacho kune shanduro nyowani. Pakati pavo, tinogona kutaura:
Linux kernel 4.12.
KDE Plasma 5.12 LTS desktop nharaunda.
LibreOffice 6.0 Hofisi Suite.
Mozilla Firefox 60 browser.
Mozilla Thunderbird 52 email uye nhau mutengi.
Pakupedzisira, mune chiziviso vanogovana zvinotevera:
“NaLeap 15 SUSE Linux Enterprise Server 15, rwendo irworwo rwakareruka. Isu tinoziva kuti nharaunda ndipo panogadzirwa zvitsva, uye vanogadzira munharaunda yeLeap vanogona kuwedzera nyore izvo zvinosvika kubhizinesi reLinux, kana zvichidikanwa. Leap 15 inopa iyo inokurumidza uye inonyanya kuchinja shanduko kune bhizinesi sevhisi, rutsigiro uye kugadzirisa.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ichi chitsva kuburitswa ndinokusiira iwe link kune yepamutemo chiziviso, chinongedzo izvi.
Dhawunorodha vhuraSUSE Leap 15
Kana iwe uchida kudhawunirodha iyi nyowani vhezheni ye openSUSE Unogona kuzviita nekuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uye muchikamu chayo chekurodha Iwe unogona kuwana mufananidzo weiyo system, mune chinongedzo izvi.
Si iwe watove wakavhurikaSUSE Leap mushandisi iwe unogona kukwidziridza kuvhuraSUSE Leap 15, asi nekuda kwekutumirwa kutsva, ivo vanofanirwa kurodha pasi kuvhuraSUSE mifananidzo yekumisikidza.
Iyo yakavhurikaSUSE Leap 15 inoshanda chete ine 64-bit Hardware dhizaini, saka ye32-bit haichakwanise.
Asi rutsigiro rweARM64 (AArch64) zvivakwa uye zvinotarisirwa munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » OpenSUSE Leap15 yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuisa